Depụta azụmahịa gị na Portal Business Bing | Martech Zone
Depụta Portal Business gị na Portal Business Bing
ebe ọ bụ na Google nwere ọtụtụ ahịa ọchụchọ, anyị na-elekwasị anya na ha ntakịrị. Otú ọ dị, Bing ejiri nwayọ weghara òkè ahịa ma wee nwee ụfọdụ ọmarịcha ngwa pụrụ iche - gụnyere gam akporo na iPad. Offọdụ atụmatụ nke ngwa ndị ahụ na saịtị Bing n'onwe ya dị mma nke ukwuu na anyị elelela Google gbaziri ma bulie igwe nchọta nke aka ha n’ụdị yiri ya.
Maapụ Bing dị ezigbo mma ma ewu ewu ya na-eto eto. Bing amalitela Portal Business Bing maka azụmaahịa debanye aha azụmahịa ha ma ọ siri ike.
Edeela m banyere mkpa nchọta mpaghara dị ịdenye aha na ọrụ azụmahịa nke Google. Onyinye Bing dịkwa oke mma, nwekwaa mgbakwunye mgbakwunye ole na ole - dị ka elele ekwentị na Usoro QR. Lọ oriri na ọtaụuụ na Ogwe nwere ike ọbụna jikọọ ma ọ bụ tinye menu ha.
Ebe ọ bụ na ịdenye aha na Portal Business Bing bụ n'efu, ọ baghị uru maka azụmaahịa na-ekwu na ha depụtara ma bulie profaịlụ azụmaahịa ha n'ịntanetị. Ndebanye aha dị mfe ma natara kaadị na mail na koodu PIN n'ime izu ole na ole. Enwere m ike ịbanye, tinye akara ngosi anyị maka azụmahịa anyị, ma jupụta ozi Portal niile dị mkpa iji bipụta azụmahịa anyị. Nwee ndidi - ndepụta gị agaghị apụta ozugbo na nsonaazụ ọchụchọ.
Tags: AOLapuimee ntughariSocietytù Na-ahụ Maka Ndị Na-ere Ihe Ahịa Digitalarụmọrụuru
N'ikpeazụ, Mmetụta site na isiokwu
Iso ndi mmadu abanye na ntinye aka nke Email gi na WiseStamp